Shirkii labaad oo bil gudaheed uu iclaamiyo Madaxweyne Farmaajo oo baaqday | Sagal Radio Services
Madaxweyne Farmaajo ayaa 22-kii bishan war saxaafadeed Madaxtooyada ka soo baxay lagu shaaciyay shir degdeg ah oo la isugu yeeray Madaxda is khilaafka ee Galmudug, si loo dhex dhexaadiyo, loona xaliyo khilaafka ka dhex taagan.
Hase ahaatee dhanka uu hoggaaminayo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey ee fadhigooda yahay Cadaado, isla markaana mar walba u dhega nugul baaqyada dowladda Federaalka ayaa soo dhoweeyay shirka, isagoo caddeeyay inay ka qeyb galayaan.
Inkastoo xaalada cakiran ee ka jirta Galmudug ay siyaasad ahaan saameysay dowladda Federaalka, marka loo eego eedeymaha is-daba jooga ah ee ku saabsan inay faragelin ku heyso, waxaa weli muuqata in dowladdu aanay xal waara ka gaarin khilaafka Galmudug oo dhowr jeer soo noq-noqday, shirar ka dhacay Muqdishana aan xal rasmi ah looga gaarin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa 8-dii bishan September isugu yeeray Shir wadatashi ah Golaha Amniga Qaranka oo ay xubno ka yihiin Madaxda dowlad Goboleedyada, iyadoo laga duulayay war murtiyeedka ay ka soo saareen shirkoodii Kismaayo, isla markaana ku hakiyeen wada shaqeyntii dowladda Federaalka.
Dadka odorasa siyaasadda ayaa sheegaya in sababaha dib u dhaca shirarka uu ku baaqay Madaxweynaha ay tahay in weli aanay dowladda xalin tabashada maamul goboleedyada, iyo xalka oo aan laga eegin halkii laga filayay, waxaase la filayaa in mar walba la isku soo dhowaado, isla markaana uu dhinac un uu tanaasul siyaasadeed ka yimaado.